မောင်တော အကြမ်းဖက် ခံရမှုကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်သွားသော ဟိန္ဒူကလေးငယ်နှင့် သက်ကြီး ရွယ်အု? - Yangon Media Group
မောင်တော အကြမ်းဖက် ခံရမှုကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်သွားသော ဟိန္ဒူကလေးငယ်နှင့် သက်ကြီး ရွယ်အု?
မောင် တောအကြမ်းဖက်ခံရမှုဖြစ်စဉ် ကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည့်ဟိန္ဒူ ကလေးငယ်နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် စာရင်းကောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကြောင့် မိသားစုဝင်များသေဆုံးကာ ခိုကိုးရာမဲ့ခဲ့ရသည့် ကလေးငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ရန်ကုန်သို့ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက် စာရင်းအတိအကျရရန် ဘူးသီး တောင်၊ မောင်တောဒေသများသို့ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် သနန္တ နဓမ္မပါလက(ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဟိန္ဒူဘာ သာရေးဗဟိုအဖွဲ့ချုပ်တို့ဦးဆောင်ကာ ကွင်းဆင်းကောက်ယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအထိ မိသားစုအားလုံး အသတ်ခံရပြီး ကျန်ရှိသည့်အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ကလေးငယ်တစ်ဦးနှင့် လူမမယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို စစ်တွေဒုက္ခသည်စခန်းတွင် တွေ့ရှိထားကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘာသာရေးအဖွဲ့ ချုပ်အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်သူက အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ရခိုင်ဒေသရှိ ဟိန္ဒူလူမျိုးများသည် ၁၉၄၈ မတိုင်မီကပင် ရောက် ရှိနေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေအရ အကြုံးဝင်ပြီး အများစုမှာ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများရှိ သော်လည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အကြမ်းဖက်ခံရမှုကြောင့် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း များ မရှိတော့သူများလည်းရှိကြောင်း၊ ယင်းအတွက်ကြောင့် ရန်ကုန်သို့ ခေါ်ယူပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ခေါ် ဆောင်ရာ၌ အခက်အခဲရှိနိုင်သ ဖြင့် အစိုးရထံတင်ပြသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းသို့ အခက်အခဲမရှိစေရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အောက်တိုဘာ ၃ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တိုင်းအစိုးရမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံ တင်ပြပေးသွားမည်ဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း ဦးကျော်သူကပြောသည်။ ”တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က လိုအပ်တာမှန်သမျှ သူတို့ဆီကိုတင် ပြဖို့ပြောတယ်။ သူတို့ဆီက တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတင်ပြ ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စာရင်းကောက်ခံပြီးပါက ရန်ကုန်သို့ခေါ်ဆောင်ကာ ပြုစုစောင့် ရှောက်သွားရန်စီစဉ်ထားပြီး ရခိုင် ဒေသတွင်သာ ¤င်းတို့ဓလေ့နှင့်အညီနေထိုင်ချင်သူများကိုလည်း အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စာရင်းကောက်ယူရေးအဖွဲ့ကို သနန္တနဓမ္မပါလက(ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ ချုပ် သာသနာပြုအကျိုးဆောင် ဒေါက်တာလှထွန်းဦးဆောင်ကာ အဖွဲ့ဝင်ခုနစ်ဦးဖြင့် သွားရောက် ကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီး ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲကိုလည်း ယင်းဒေသများ၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရခိုင်အရေးတွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ပေါင်း လေးထောင်ဝန်းကျင်ရှိပြီး စစ်တွေမြို့တွင် ဒုက္ခသည် ၁၂ဝဝ ကျော်၊ ဘူးသီးတောင်တွင် ၇ဝဝ ကျော်၊ မောင်တောတွင် ၁၈ဝဝ ကျော်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဒုက္ခသည် ၅ဝဝ ကျော်ရှိကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဒုက္ခသည်များပြန်လာနိုင် ရေးအတွက်လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ညှိနှိုင်းကာ ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော်သူက ပြောသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဟိန္ဒူမျိုးနွယ်စု ၁ဝ စု၊ လူဦးရေစုစုပေါင်း ဆယ့်နှစ်သိန်းကျော် နေထိုင်လျက်ရှိ ပြီး ရာခိုင်နှုန်း ၈ဝ ခန့်မှာ သက်သတ်လွတ်စားသုံးသူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။